idealo - Price Comparison & Mobile Shopping App 15.2.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 15.2.3 လြန္ခဲ့ေသာ5ရက္က
Application မ်ား ေစ်း၀ယ္ျခင္း idealo - Price Comparison & Mobile Shopping App
idealo - Price Comparison & Mobile Shopping App ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ငါတို့ရှိသမျှသည်စျေးဝယ်အလွန်စိတ်ဖိစီးစေနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်အွန်လိုင်းငါသိ၏။ ငါသညျဤအရာအတွက်အလွန်အကျွံပေးဆောင်လား စျေးကွက်အပေါ်ပိုကောင်းရွေးချယ်စရာရှိပါသလား ငါအကောင်းဆုံးသဘောတူညီချက်ရတဲ့လား
ပြဿနာဖြေရှင်း! Idealo အခမဲ့, သင်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံရှိသည်ကူညီပေးသည်ကြောင်းကိုသင်၏စျေးဝယ်အဖော်ပါ!
သငျသညျ idealo, ကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးထုတ်ကုန်, နည်းပညာ, သို့မဟုတ်ဥယျာဉ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများရှာဖွေနေပါသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုကဲ့သို့သော eBay, အမေဇုံအဖြစ်အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းစတိုးကနေအကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုအပါအဝင်, သင်စျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းတွေကိုရှာဖွေရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကူညီရန်စုံလင်စျေးဝယ်လက်ထောက်ဖြစ်ပါသည် ယောဟနျသ Lewis ကနှင့်ပိုပြီး။
1. Android ပေါ်မှာအခမဲ့များအတွက် idealo app ကို download လုပ်ပါ။
သငျသညျကိုဝယ်ချင်သောအရာတို့ကိုပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းတွေများအတွက် 2. ရှာပါ။
သူတို့နှစ်သက်တဲ့စျေးနှုန်းကိုရောက်ရှိသည့်အခါ 3. သင်အကြိုက်ဆုံးထုတ်ကုန်များအတွက်စျေးနှုန်းသမိုင်းနှင့်သတ်မှတ်ထားစျေးနှုန်းသတိပေးချက်များကိုစစ်ဆေးပါ။
စျေးနှုန်းကရြောကျသညျ့အခါ 4. ချက်ချင်းအသိပေးချက်များကို Get
ရုံပိုင်ခွင့်သင့်ရဲ့ဆိုဖာ မှစ. , မှော်စျေးဝယ်ကမ္ဘာကြီးကိုအသစ်သောအရာကိုစူးစမ်းဖို့ပိုနှစ်သက်သူကို idealo နဲ့တစ်ချက်မှာအကောင်းဆုံးကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံ, သငျသညျ shopaholics အားလုံးအတှကျတစ်ဦးစျေးဝယ်ပရဒိသု, ခံစားပါ။
idealo ဥရောပရဲ့ဦးဆောင်စျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်တွင်ကျယ်စွာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာသင်အချိန်နှင့်ငွေကိုကယ်တင်စေသည်အခမဲ့တော်လှန်ရေးသမား App ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့လက်ရှိဒါရုံအပန်းဖြေခြင်းနှင့်ဖွင့်လှစ်သည့် idealo app နှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်း browsing စတင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖုန်းသို့မဟုတ်ယင်း trendiest သင်တန်းဆရာ, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းတိရစ္ဆာန်အဘို့အပင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, 30000 စျေးဆိုင်ကနေ 183 သန်းကမ်းလှမ်းမှုရှိသည်။
idealo မှာ, သငျသညျအစဖက်ရှင်, မိတ်ကပ်နှင့်အလှအပထုတ်ကုန်, အီလက်ထရွန်နစ်, ဗွီဒီယိုဂိမ်းများ, စက်ဘီး, ကင်မရာများ, နာရီနှင့်စံပြစျေးနှုန်းများမှာအကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့်အထူးလျှော့စျေးရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
သင်အကြိုက်ဆုံးထုတ်ကုန်ရှာ, သင်သွားလေရာရာ၌လူကြိုက်အများဆုံးစျေးဆိုင်ကနေထူးခြားတဲ့နှင့်တတ်နိုင်ကမ်းလှမ်းမှုသန်းပေါင်းများစွာမှတဆင့်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသော browsing အတွက်အဘို့, သင့်စျေးဝယ်စာရင်းယူသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအသုံးပြုပါ။
Google မှာ app ကို Download လုပ်အသစ်တစ်ခုကိုစျေးဝယ်စွန့်စားမှုစတင်များနှင့်အလုံခြုံဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးစျေးဝယ် app ကိုအတူအွန်လိုင်းစျေးဝယ်၏နက်နဲသောအရာရှာဖွေတွေ့ရှိ, idealo ယခု Store မှာ Play ။ ဒါဟာမဖြစ်မနေ-ရှိစျေးဝယ် app ကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းမှာအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ရရှိရန်နှင့်သွားလာရင်းအပေးအယူနှိုင်းယှဉ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အရေးအပါဆုံး features တွေ:
Built-in ဘားကုဒ်ကိုစကင်နာများနှင့်စာသားသို့မဟုတ် Ean ကနေတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းရှာဖွေရေး»
»အသေးစိတ်ထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်: တကယ်တော့စာရွက်များ, ရုပ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, ကျွမ်းကျင်သူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူ ratings
filter ကို၏ Wide အကွာအဝေး»နဲ့ options sorting
ရှာဖွေမှုများနှင့်ဘားကုဒ်ကို Scan ဖတ်အတိတ် Access ကို»
အီးမေးလ်ကနေတဆင့်မိတ်ဆွေများကိုမဆိုကမ်းလှမ်းမှုများထပ်ဆင့်ပို့, WhatsApp ကို, Facebook, Twitter သို့မဟုတ် SMS ကို / iMessage »
ဒါဟာသင့်ရဲ့ခေါ်ဆိုမှုကိုဖွင့်, ယခုသင့်ရဲ့ Android device ကိုများအတွက်အခမဲ့စျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ် app ကို download, နဲ့6နိုင်ငံများ၌ရရှိနိုင်ပါသည်နောက်ဆုံးပေါ်အပေးအယူအပေါ်အထူးလျှော့စျေးရှာတွေ့: ဂျာမဏီ, ပြင်သစ်, သြစတြီးယား, အီတလီ, စပိန်နှင့်အင်္ဂလန်။
"ဒီ Halfords စျေးနှုန်းပွဲ။ ငါ့ကိုပိုက်ဆံတွေအများကြီးသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ပြီးဈထက်ဝက်နီးပါးစျေးနှုန်းမှာပစ္စည်း Brilliant ရ" ။ Graeme Howe
"ငါ့အဘို့ယခုနှစ် App ကို!" Anyadike Chijioke
"အမှုအရာများဝယ်ယူနှင့်အတူကူညီပေးဖို့လမျးဖွောငျ့ရှေ့ဆက် app ကို။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်, လုပ်ငန်းစဉ်၏အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းသို့အချိန်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်၏။ " ဒါဝိဒ်သည်ဝီလျံဝီလျံ
လက်ရှိထုတ်ကုန်အချက်အလက်များနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများရယူနိုင်ရန်အတွက်»ယင်း App ကိုအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်လိုအပ်သည်။
» function ကိုရန်ဘားကုဒ်ကိုစကင်နာဘို့အလို့ငှာ, ကင်မရာ setting ကို App ကိုဖွင့်ထားရပါမည်။
»အသုံးပြုသူတစ်အကောင့်ဖွင့်တင်ထားရန်အမိန့်မှာ App ကိုသင့်ရဲ့ device များ၏အကောင့်တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။ ဒီ function ဂျာမနီမှာလက်ရှိအချိန်တွင်သာရရှိနိုင်ပါသည်။
တုံ့ပြန်ချက် & ပံ့ပိုးမှု:
»»»သင်တို့သည်ငါတို့၏ app ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, Play စတိုးပေါ်သို့မဟုတ် Google+ ကနေတစ်ဆင့်သူကဘယ်လောက်ရှိသလဲကျေးဇူးပြုပြီး«««
»»»ကျွန်တော်တို့ကို app@idealo.co.uk «««ရန်သင့်တုံ့ပြန်ချက်ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့် idealo app ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကိုကူညီပါ
idealo - Price Comparison & Mobile Shopping App အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
idealo - Price Comparison & Mobile Shopping App အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
idealo - Price Comparison & Mobile Shopping App အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
idealo - Price Comparison & Mobile Shopping App အား အခ်က္ျပပါ
fetek စတိုး 7.85k 1.31M
idealo - Price Comparison & Mobile Shopping App ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း idealo - Price Comparison & Mobile Shopping App အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 15.2.3
ထုတ်လုပ်သူ idealo internet GmbH
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.idealo.co.uk/agb/PrivacyPolicy.html
လက်မှတ် SHA1: AA:65:03:EA:76:BC:46:0F:19:CB:4F:B4:CD:1D:55:30:D7:9C:AD:4F
အဖွဲ့အစည်း (O): Idealo Internet GmbH
နယ်မြေ (L): Berlin
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Berlin
idealo - Price Comparison & Mobile Shopping App APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ